saviour kasukuwere on News24
ARTICLES RELATING TO SAVIOUR KASUKUWERE
A Namibian farmer has threatened to sue the government for leasing four farms to a Russian billionaire, and Zimbabwe's former local government minister Saviour Kasukuwere has been denied access to his passport for a "business trip" to SA.
A former ally of ex-first lady Grace Mugabe who was facing charges of unlawfully skipping the country has reportedly been acquitted.
A former ally of ex-first lady Grace Mugabe says he fled Zimbabwe as “a refugee” in the wake of last year’s military takeover, a report says.
A Grace Mugabe ally, who recently returned home from self-imposed exile, has been arrested and arraigned before the Harare magistrate's court for allegedly exiting the southern African country unlawfully in November, a report says.
Zimbabwe's former local government minister Saviour Kasukuwere, who is facing corruption charges, has reportedly been denied access to his passport after he had filed a court application to get it back for a "business trip" to SA.
A former ally of Grace Mugabe has been placed on a "persons of interest" list by Zimbabwean police in the wake of last month's grenade attack on a ruling party rally, a report says.
Top Africa stories: Zim's $15bn diamond loot, DRC, Nigeria
Zimbabwean parliament has reportedly 'set Robert Mugabe off the hook' over the loss of diamond revenue amounting to $15bn, and Muhammadu Buhari has offered a symbolic apology to the deceased winner of the 1993 democratic election.
Top Africa stories: Mugabe ally's son, DRC
The son of former president Robert Mugabe's ally has reportedly accused Zanu-PF supporters of invading his farm, and the DRC has been slammed over 'arbitrary' activist detentions.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has announced the date for the country's general elections, and Rwandan President Paul Kagame has responds to Zimbabwean opposition leader's claims.
Ex-President Robert Mugabe has failed to show up before a parliamentary committee investigating a missing $15 billion of diamond revenue, and superstition is stopping Ebola victims from seeking medical care.
A key ally of Grace Mugabe is set to return to Zimbabwe six months after he fled into exile in the wake of the military takeover, and ex-president Robert Mugabe has 'sent emissaries for coalition talks with MDC leader Nelson Chamisa'.